GRANITE CHIMBORO MAPATA ANOTUMIRWA KUMALAYSIA KUTUMIWA 4 MAPINESI JINAN KABHUKU GRANITE SURFACE NDIMA NE STAND (GRADE 00) KUMATAI WEMALAYSIA
ne admin pane 2021-01-12
Yakakwira chaiyo granite pamusoro pemahwendefa inogona kupa chaiyo rejista ndege yekuongorora basa uye neyekugadzika kwebasa. Iwo akakwirira mwero wekupfava, mhando uye hunyanzvi zvakare unovaita iwo akakosha mabhesi ekumisikidza akaomesesa mamakanika, emagetsi uye emagetsi gauging masystem. Fekitori yedu ndeye ...
Hebei Bocheng Co-chisikwa Kuyera Chishandiso Kugadzira Co, Ltd ichakupa iyo Cast iron pamusoro pemahwendefa ane mhando yepamusoro, yemakwikwi mitengo uye mushure mekutengesa sevhisi Fekitori yedu inoitawo dhizaini, kusimudzira uye kugadzira zvigadzirwa zvechinyakare uye inopa mhinduro dzechinangwa chaicho mure. ..
CHITSAUKO CHITSAUKO CHE 3D NE2D Welding TABLE MunaJULY, 2020
Yapedza 3 seti 1500x100x200 3D yekutengesa tafura sisitimu uye gumi nemana maseti 2D Welding system yemutengi kubva kuMorocco Yedu inoshanduka clamping system inokura pamwe nemabasa ako. Iyo modular dhizaini yeiyo base njanji system inokupa iwe yakakura mukana rusununguko rwekugadzirwa kweakakura kupfuura zvakajairika zvinhu ...